DEG DEG:Deegaanadii dhiiga badan uu ku daatay oo dib loogu noqonayo & Dagaalkii sababay dhimashada badan oo…. – Puntlandtimes
DEG DEG:Deegaanadii dhiiga badan uu ku daatay oo dib loogu noqonayo & Dagaalkii sababay dhimashada badan oo….
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararka Warsidaha Puntlandtimes.com uu ka helayo deegaanadii lagu wada dagaalamay ee Koonfurta gobolka Sool oo uu dagaal ku dhex maray malayshiyaad beeleedyo kasoo kala jeeda deegaanada Kalabaydh iyo Dhumay oo ka tirsan isla gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan inay socdaan qorshayaal dib ay ugu noqdanayaan shacabku deegaanadoodii hore.
Boqolaal qof ayaa haatan u hayaami doona deegaanadii ay hore uga soo barakaceen ee Dharkayn iyo Dhumay, waxaana xiligani muuqda in xasilooni buuxda ay ka dhacday deegaanka.
Dagaaladii sababay dhimashada badan ee ka dhacay deegaanka Dhumay ayaa xal waara laga gaadhay kadib markii dhinacyadii kuwada dagaalamay deegaanadaasi nabad la kala dhex dhigay.
Madaxweynaha dowladd deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cagjar ayaa gol gol nabadeed oo uu dhigay magaalada JigJiga waxa uu heshiis ku dhex maray odayaasha dhaqanka, waxgaradka, isimadda dhaqanka labada beelood, waxaana heshiishkaasi qayb ka ahaa qaar kamid ah isimadda dhaqanka Soomaaliyeed.
Isimadda dowladd deegaanka, ganacsatada Soomaaliyeed, qurba joog iyo madaxweynaha dowladd deegaanka deeqo isugu jira raashin, baco, dawooyin iyo agab kale gaadhsiiyey xiligii colaadu ay taagnayd qoysas ka barakacay deegaanadii lagu wada dagaalamay ee gobolka Sool, kuwaas oo xaalad nololeed oo aad u adag ay lasoo gudboonaatay.